Tsy fandriampahalemana any Toamasina : miandahy miambavy mihitsy ireo manao asan-jiolahy | NewsMada
Tsy fandriampahalemana any Toamasina : miandahy miambavy mihitsy ireo manao asan-jiolahy
Par Taratra sur 05/08/2016
Nanao hazalambo ireo olon-dratsy ao Toamasina ny polisy any an-toerana. Jiolahy sy jiovavy miisa 15 be izao indray sarona teo am-panaovana asa ratsy, ny alarobia teo.
Tamina fokontany maromaro any an-drenivohitr’i Toamasina ny nahasamborana ireo olon-dratsy ireo. Enina mirahalahy voasambotra tao Ambolomadinika, Tanamborozano, Ambalankisoa ka ny iray amin’ izy ireo vao avy nivoaka ny fonja ny alatsinainy teo. Valo mirahalahy kosa tao Mangarivotra sy Ankirihiry ary Cité Haras ka hatreny Valpinson, toerana fanaovan’ izy ireo ny asa ratsiny, ary ny efatra tamin’ ireto kosa, efa mpamerin-keloka.
Manodidina ny 14 ka hatramin’ny 20 taona eo avokoa ireto voasambotra mpanao asa ratsy any Toamasina ireto. Efa maro ihany izy ireo no saron’ny polisy, saingy mamerin-keloka hatrany. Manendaka ary mahavita mamono ireto andian-jatovo ireto. Saika efa mitovitovy amin’ireo Foroche any Antsiranana ireto zatovo ireto. Manao antso avo ho an’ny raiamandreny mba samy hanara-maso ny zanany ny kaomisera Razafindahy Manitra Fleurys.
Zana-bahoaka ihany ireo tanora ireo, saingy mety noho ny tsy fananana, na ny tsy fisian’ny fanaraha-maso azy ireo ny mahatonga azy ireo hibirioka.
Mety hifanehatra amin’ny polisy amin’ny alina anefa ireo tanora ireo, ka sanatria ho maty na ho voatifitra. Matetika, manana fitaovam-piadiana ihany koa izy ireo, ary sahy mamaly rehefa amin’ny fotoana hisamborana azy. Izany indrindra no hanentanan’ny polisy ny mba hanarahan’ny ray aman-dreniny maso ny zanany mba tsy hiafara amin’izany toe-javatra izany. Ireto voasambotra, atolotra ny fampanoavana ary hiafara any am-ponja aorian’izay.
Tsy afa-miasa tsara araka ny maha mpitandro filaminana azy ihany koa ny polisy any Toamasina manoloana ny asa ratsin’ ireo tontakely izay mihamitombo isa ankehitriny. Anisan’ izany ny tranga niseho tamin’ny asabotsy alina lasa teo, raha nisy nitora-bato ny fiara tsy mataho-dalana fampiasan’ny polisy iray nanao fisafoana tamin’ny alina tany Dépot .Vokany nandritra ny tora-bato nahery vaika nahazo ity fiara ity, nanao tari-dositra aloha ireo polisy. Nanao tampody fohy tampoka ireto farany ka sarona ny telo lahy tamin’ ireo nitora-bato. Voalaza fa fianakaviana olom-boafidy any Toamasina ny iray. Nanao sesimontotra, noho izany, ny fanelanelanana teny anivon’ny fitsarana mba hamotsorana ireto fianakaviana olom-boafidy ireto tsy hampidirina ny fonja. Ireto zatovo izay sahy niloa-bava fa raha mbola izy ireo koa no havan’ ilay olom-boafidy, nandritra ny fihazomana azy telo lahy tao amin’ny “violon”, tsy hiditra am-ponja izany. Anisan’ny mampiverimberina ireo tanora hanao ny asa ratsiny ny toe-javatra tahaka izany.